Manjaro 17.1.7 yaburitswa. Iyo hombe yekuvandudza iri pano | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 17.1.7 yaburitswa. Iyo hombe yekuvandudza iri pano
Isu hatina kutaura nezve imwe yeanorarama kutenderera kuburitsa kugovera pane iyo Gnu / Linux chiitiko kwenguva yakareba. Asi izvo hazvina kumira kukura, kure nazvo. Nhasi tinogona kutaura kuti vhezheni nyowani ine kuvandudza kukuru yaburitswa: Manjaro 17.1.7. Kugoverwa kwakavakirwa paArch Linux iyo yakaratidzirwa sekuparadzaniswa nemhando dzakasiyana nedesktops uye mamaneja ewindo.
Izvi hazvisi zvega zveManjaro asi ichokwadi kuti Manjaro inopa ISO mifananidzo ine akasiyana desktops akagadziriswa nekutadza. Nekudaro, isu tinowana Manjaro KDE 17.1.7, Manjaro Gnome 17.1.7, Manjaro Deepin 17.1.7, Manjaro LXDE 17.1.7 zvichingodaro.
Uye isu tichavawo neichi chitsva yakaburitsa optimization yeIntel's KabyLake chipsets. Kugadziridza uko kumwe kugovera kusisina, kunyangwe Arch Linux, amai vaManjaro vanogovera. Manjaro 17.1.7 inosanganisa mhedzisiro hombe yekuvandudzwa kweGnome nePlasma desktops. Saka editions ane aya desktops ndiwo ayo anotambura zvakanyanya shanduko. Iyo GRUB yekuparadzira inoitwa huru yekuvandudza uye ikozvino yave kugona tsigira anotyaira akaomarara neF2FS faira system.
Iko musimboti wePacman chishandiso yakagadziriswa uye yakagadziriswa, kuve wakatsiga, nekukurumidza uye nekumwe kugadzirisa kwatichawana mune izvi izvo. Zvakare neyeManjaro Zvirongwa Mamaneja chishandiso, chishandiso chiri kutarisira kugadzirisa uye kugadzirisa desktop uye zvimwe zvinhu zvekuparadzira, senge Internet kubatana kana iyo skrini resolution, yakagadziridzwa zvakare.
Kufanana nekumwe kugovera, Manjaro ine vanoverengeka vanogadzira vanochengeta avo epamutemo marekodhi uye kuchenesa izvi zvemapakeji asina basa uye kutarisa mapakeji matsva. ZveManjaro 17.1.7 tinogona kutaura izvozvo pamusoro pemapakeji mazana matatu anga asingachadiwe abviswa, mapakeji anoenderana neshanduro dzekare uye kuti chirongwa pachacho chakamira kuchishandisa. Manjaro 17.1.7 inogona kuwanikwa nekuvandudza iyo inoshanda sisitimu, kana isu tiine Manjaro uye kana tisina iyo yakaiswa, zvinokwana kuenda ku iyo yepamutemo webhusaiti uye tora iyo ISO mufananidzo weiyo vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Manjaro 17.1.7 yaburitswa. Iyo hombe yekuvandudza iri pano
Kwazisai, chii chakaitika kune iyo Manjaro peji nhasi, Kubvumbi 1, 2018, haina kujairika uye inongopa 32-bit xfce, une ruzivo here zvakaitika?